धनबल राई « Pariwartan Khabar
पहाडमा जाडो बढे, तराईले सेक्नुपर्छ, आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ !(आँधी: बारा–पर्सा)
१८ चैत्र २०७५, काठमाडौं आज देशलाई एकचोटी फेरी दुखेको छ । ति असह्य चोटहरुबाट देशले सहिष्णुता गुमाएको छ । अहिले म गीतकार दिनेश अधिकारीलाई सम्झिरहेको छु । अनि गायक स्वरुपराज आचार्यलाई
दुई दिदी–बहिनी ‘रुविशा’ र ‘एलिशा’ ४० घण्टा लामो युगल नृत्य गरेर ‘विश्व रेकर्ड’मा नेपाललाई ह्याट्रिक दिलाउँने साहसमा जुट्दै ! (भिडियो सहित)
१७ चैत्र २०७५, काठमाडौं ‘नेपाल’सँग सांस्कृतिक सम्पत्तिहरु प्रशस्तै छन् । कला, भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, तथा विभिन्न लोक परम्पराहरु अझै जीवितै छन् । जहाँ नेपालीहरु आफ्नै सांस्कृतिक सम्पत्तिहरुमा रमाएका छन् ।
डिग्री होल्डर युवाहरु ‘कोरिया’तिर, नेपाली सांसदलाई ‘एसईई’को पिर !
१४ चैत्र २०७५, काठमाडौं अहिले नेपालमा मा.वी. तहको प्रवेशिका परीक्षा अर्थात (एसईई) संचालन भईरहेको छ । जुन, परीक्षामा ‘शान्ता चौधरी’ नामकी एक विद्यार्थी पनि सहभागी छिन् । जो एक साधारण
कवयत्री तुम्खेवाको चौंथो कृति ‘हल्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे’ लोकार्पण !
०९ चैत्र २०७५, काठमाडौं साहित्यकार एवं कवयत्री विमला तुम्खेवाको नयाँ कविता संग्रह ‘हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे’ लोकार्पण भएको छ । शुक्रबार काठमाडौँको मण्डला नाटक घरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा
प्रविन र रोजीनाद्वारा अभिनित ‘जुनको आँशु’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक !! (भिडियो सहित)
०७ चैत्र २०७५, काठमाडौं नेपाली सांगितिक आकाशमा विभिन्न विधाका गीतसंगितहरु भित्रिरहेका छन् । त्यस्तै भर्खरै मात्रै नेपाली सांगितिक आकाशमा छाएको एउटा गीत हो,,, ‘जुनको आँशु’ ! जसले अहिले नेपाली सांगितिक
ब्रेन क्यान्सरले ग्रस्त ‘रबिना राई’लाई सहयोगको लागि कारुणीक अपिल ! (डकुमेन्ट्री सहित)
०३ चैत्र २०७५, काठमाडौं जीवनमा कुनै त्यस्तो अप्रिय चिज छ भने, त्यो मृत्यु हो । जसबाट मान्छे सधैं टाढा रहँन खोज्छ । तर,कदापी सक्दैन । मान्छे आफु रुँदै आउनु अनि
युवापुस्ताका प्रेरणा तथा बहुप्रतिभाशाली एक पात्र ‘आदेश’! सबै क्षेत्रमा जुर्मुराउँदो पाईला लम्काउँदैै !(भिडियो सहित)
०१ चैत्र २०७५, काठमाडौं यहाँ धेरै मान्छेहरु जन्मिएका छन् । जन्मिछन् । अनि, जन्मिनेछन् । जन्मिन्छन्, अनि केही समयावधिपछि कहिल्यै नफर्किने गरी जान्छन् पनि । यो त, प्रकृतिको नियम नै
शौचालयदेखि सदनसम्म नारीमैत्री स्वरहरु गुञ्जिरहुन्, सबै नारी स्वरुपमा शुभकामना !!
२४ फागुन २०७५, काठमाडौँ आमाको काख, दिदी-बहिनीको स्नेह, श्रीमती अनि मायालुको माया, यी सबै नारीपात्र अनि यिनको प्रगाढ मायाँको पछ्यौरीभित्र नै एउटा पुरुषको जीवनका अवयवहरु चलायमान हुन्छन् । आज तिनै
सन् १९४७ देखि हालसम्ममा भारत–पाकिस्तानबीच स्थापना भएका तिक्तता र सुमधुर सम्बन्धहरुको प्रमाण !
१५ फाल्गुन २०७५, काठमाडौं भारत र पाकिस्तान दुबै दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु हुन् । सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट छुट्टिएर दुबै स्वतन्त्र राष्ट्र बनेका थिए । स्थापनाकालबाट नै यी दुई देशहरुबीच
‘अल्ट्रा म्याराथन’को सफलतामा केचनाको ओरालो नझरी सगरमाथाको चुचुरो पुगेकी एक सफल नारी ‘मीरा’ ! (भिडियो सहित)
१० फाल्गुन २०७५, काठमाडौं ‘खेल’ खेलकूद वा कृडा शरिरिक गतिबिधि हो । जुन, रमाईलो वा प्रतिस्पर्धाको निम्ति गरिन्छ । खेलसँग धेरै विषयवस्तुहरु जोडिन पुग्छन् । साहसी नारी ‘मीरा राई’सँगको भिडियो
‘लुट कान्छा लुट’ गीतको प्रभाव : पशुपतिमय नेपालको बारेमा कसले के भन्छ ? (भिडियो सहित)
०५ फाल्गुन २०७५, काठमाडौं अहिले देश पुरै पशुपतिमय बनेको छ । आफ्नो पर्शनल युट्युब च्यानलमा अपलोडेड भिडियो, गायक पशुपति शर्माले शनिबार साँझ हटाउन बाध्य भए । गत बिहिबार अपलोड भएको
नेपालमा हुने आईएफबीबी प्रोफेशनल लिगको गेस्ट पोजरका रुपमा विश्व बडि बिल्डर ‘रोली विङ्कलार’
०३ फाल्गुन २०७५, काठमाडौं विश्व बडि बिल्डरका हस्ती ‘रोली विङ्कलार’ बिहिबार नेपाल आईपुगेका छन् । शनिबार काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा हुने ‘आईएफबीबी’ प्रोफेसनल लिग नेपाल बडिबिल्डिङ च्याम्पियनसिप २०१९ का लागि विङ्कलार
ड्रग्सबारे छलफल गरिने ग्रुपको एकमिन नै दिपिका, अब दिपिकामाथि थप कडाइका साथ अनुसन्धान गरिने
आज काठमाडौँ उपत्यकामा ६४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
थप १ हजार ३१३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
जीवन राम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा अस्पतालको अनुगमन
‘दिपिका कहिलेकाहिँ डराउँछिन्, सोधपुछमा मलाई उनीसँगै बस्न दिइयोस्’ भन्दै रणवीरले एनसिबीलाई पठाए निवेदन
जब निशानले ‘संगै मरौला’ भनेर बाचा गरे